लचीला तिकोकोलोभया: गुणहरू, अनुप्रयोग र भण्डारणका विशेषताहरू
जब औद्योगिक या आवासीय भवन पूर्वनिर्मित भवन को निर्माण गर्न को लागि विशेष सामाग्री को व्यक्तिगत संरचनात्मक तत्वों को बीच मा सील गर्न जरूरी छ। किन समुद्री जहाज प्रयोग गर्ने? जोडहरू - कुनै पनि संरचनाको सबैभन्दा कमजोर स्थान, किनभने तिनीहरू नमीमा घुसाउन सक्दछ। यसले वेल्डेड भागहरु को जंग को तेज गर्न को लागी धमकी गर्छ, जो भवन को सेवा जीवन को कम गर्न सक्छ, र एकदम महत्वपूर्ण। उद्योगले धेरै प्रकारका पदार्थहरू बिक्री गर्न मुछिएको छ। तिनीहरूमध्ये एक चिसो टिपोकोलोभ्य एएम55 हो।
यो धेरै घटक को संरचना भनिन्छ, जसको आधार सिंथेटिक रबर हो। सामान्य तापमानमा, पदार्थले रबड जस्तो लोचदार सामग्रीलाई ठोस बनाउँछ। किनकि सीटलन्टले सल्विन्टहरू समावेश गर्दैन किनकि यसको उपचार पछि हट्ने छैन, त्यसकारण कुनै पादरीहरू छैनन्, र नमीको प्रवेशबाट साथीहरू सुरक्षित रूपमा सुरक्षित हुन्छन्।
सामग्रीसँग लगभग सबै भवन निर्माण सामग्रीहरू: ईटा, धातु, काठ, कंक्रीट, प्लास्टर र अरूसँग उत्कृष्ट आसंजन छ।
सबै भन्दा महत्वपूर्ण विशेषताहरु जुन एक थियोकोइड सीलेंट छ, प्रभावहरूको उच्च प्रतिरोध:
यसका लागि धन्यवाद, सीआईएस देशहरू र रूसको कुनै पनि जलवायु क्षेत्रमा सामग्री प्रयोग गर्न सम्भव छ।
सेटलियहरुको लागि आवश्यकताहरु
संयुक्त स्थानको बावजुद, प्रयोग गरिने सिमुल सामग्री:
सबै मौसम परिस्थितिमा सबैका विशेषताहरू राख्नुहोस्।
लामो समयको लागि तपाईंको गुणहरू राख्नुहोस्।
पानीबाट जोडहरू सुरक्षित गर्नुहोस्।
हवालाई मानक अनुसार निर्धारित भन्दा बढी अनुमति नदिनुहोस्।
विभिन्न आक्रामक पदार्थहरू (एल्किस, एसिड) लाई प्रतिक्रिया नदिनुहोस्।
अनि, निस्सन्देह, उपभोक्ताहरूको लागि महत्त्वपूर्ण विशेषताहरु मध्ये एक छ जसले मोचियोकोकोओलोभया हुनु पर्छ मूल्य हो। आज यो पर्याप्त सस्ती रहेको छ र 210-230 rubles को दायरामा छ। क्षेत्रको आधारमा 1 किजीका लागि।
सूचीबद्ध आवश्यकताहरू देखि देख्न सकिन्छ, सील को लागी सामग्री त्यस्ता गुणहरू हुनुपर्छ जुन कुनै पनि अन्य भवन निर्माण सामग्रीमा थप प्रस्तुत गरिएको छैन।
माईस्टिक माईबल को प्रयोग को लागि नयाँ संरचनाहरु को मरम्मत या निर्माण को समयमा प्रयोग गरिन्छ:
नमी देखि निर्माण संरचना को conjugation को सबै नोडहरुको संरक्षण।
सील जोड्नुहोस् जुन झूटो बालकनी वा एक गर्त छतमा स्थित छ।
ईंटको भित्ता नजिकको धातु तत्वहरूको सील, छतमा, अटारी।
अन्त-ब्लक, अन्तर-प्यानल र अन्य प्रकारका जोडहरू सिन्ड गर्ने जुन बाह्य पर्खालहरू सुरक्षित गर्दछ।
निर्माण समुहको पनरोकिंग संरक्षण।
थियोकल सीलेंट दुई पेस्ट्रीको एक सेट हो। तीमध्ये एकलाई कताईरहेको छ, अर्को आधारभूत हो। तपाईंले सामग्री प्रयोग गर्न सुरु गर्नु अघि, तपाईंलाई तयार गर्न आवश्यक छ। गर्नका लागि, यो क्रेन राम्रो तरिकाले पेस्ट गर्न आवश्यक छ र त्यसपछि यसलाई निर्देशनमा संकेत गरिएको रकममा मुख्य भागमा परिचय दिनुहोस्। पदार्थ को मिश्रण न गर्नुहोस जब दुवै घटक मिश्रित हुन्छ, र वहाँ रंग को तलाक नहीं हुनेछ। तर यो आवश्यक छ कि पहिले आवेदन को सीलेंट को तैयार गर्न को लागी, अन्यथा यो पदार्थ प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले कडा हुनेछ, - चिसो एक देखि 15 घण्टा सम्म व्यवहार्य रहन्छ। सेटिङ समय परिवेश तापमान मा निर्भर गर्दछ। पूर्ण रूपमा भ्वाइसनाइजेसनको प्रक्रिया 6-10 दिन भित्र अन्त्य हुनेछ। तर यदि परिवेश तापमान शून्य भन्दा कम छ भने, कडा प्रक्रिया धीमा हुन्छ र -40 डिग्री सेल्सियसमा बन्द हुन्छ।
सील जोड्ने ज्वालामुखीको गति बढाउन, तिनीहरू गर्म हुन सक्छन्। यदि ताप तापक्रम 80 डिग्री हो भने प्रक्रिया पूर्ण 12-16 घण्टामा पूरा गरिनेछ, र 50 डिग्रीमा कठोरता 26-36 घण्टामा अन्त्य हुनेछ।
सेटलन्ट लागू गर्नु अघि, तपाईंलाई सतह तयार गर्न आवश्यक छ - यसलाई बर्फ, मलबे, ग्याँसबाट सफा गर्न। केवल सूखी सतहहरु मा चिसो टाकोकोलोभया आवेदन गर्नुहोस्। यदि नमी उपस्थित छ भने, यो एक चीग संग पकाउनु पर्छ। तहको मोटाई2देखि5मिमी सम्म हुन सक्छ। सीम्याम कति ठूलो छ भन्ने आधारमा, सीलेंटको लगभग 100-300 जी चलिरहेको मीटर छोड्न सक्छ। यदि वर्षा, हिमपात, र सडकमा काम आवश्यक छ भने, सतह प्रशोधन निषेधित छ।
एक ब्रश, स्पाट्युला, सिरिगेको साथ धेरै सजिलै माचदार तियोकोलोभया लागू गर्नुहोस्। स्लॉटको तलमा, उत्पादन सजिलै पिरोल्न सकिन्छ र, यदि आवश्यक भएमा एक स्पट्युला संग छ। निर्माताहरू 10 वर्ष वा माथिबाट: सामग्रीको न्यूनतम सेवा जीवनको ग्यारेन्टीको गारंटी: यसले वातावरणको आक्रामकतामा निर्भर गर्दछ।
एक महत्वपूर्ण विवरण: मोचको तयारीमा कुनै पनि सल्विन्ट प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ।
भण्डारण र यातायात
धातु बक्सेमा बिक्री सीलिंग मोचको लागि, मुद्रित गत्ता वा कुनै अन्य कन्टेनर ड्रम। यसको लागि मुख्य आवश्यकता - यो airtight र चौडा गर्दन हुनुपर्छ। पूर्व पेस्ट प्यालेथेलिनेको एक प्याकेटमा प्याक गरिएको छ र त्यसपछि एउटा टायर बक्समा राखिएको छ। यसको वजन 30 वा 75 किलो। सामग्री घरको भण्डारण गर्न सकिन्छ, जुन राम्रो हो हानिकारक छ, वा एक चन्द्रमा को तल प्रत्यक्ष सूर्य किरणहरूको रक्षा गर्न र प्रवेश गर्न नमीलाई रोक्न। किनकि सेटलन्टले उच्च र कम तापमानको डरलाग्दो छैन, यो वर्षको कुनै पनि समयमा भण्डारण गर्न सकिन्छ, तर6महिना भन्दा बढी छैन।
यदि मिका तिकोलोलोभया बाहिर भण्डार गरिएको छ र तापमान माथि +30 ओ एस माथि उचाल्छ वा तल -20 ओ एस हुन्छ भने, सामग्री सुरक्षित वा भण्डारको लागि अनुकूलित हुनुपर्छ।
यातायात सीलट कुनै पनि प्रकारको यातायातमा हुन सक्छ, किनभने यो एक गैर खतरनाक पदार्थ हो।
यद्यपि मधुमेह तिकोलोलोभिया एक खतरनाक पदार्थ होइन, यो अझै पनि केही सावधानीहरू पालन गर्न आवश्यक छ:
रबड दस्ताने पहन गरेर काम गर्न तल पाउनुहोस्।
छालाको सतहबाट सीधा सम्पर्क नदिनुहोस्।
यदि सामाग्री अप्रत्याशित छालामा प्रकट हुन्छ भने, यो एथिल शराब प्रयोग गरेर हटाइनु पर्छ। यस पछि, छालाको सतह साबुनको साथ धो।
काठ बीम ओवरलैप गर्ने गणना - आधारभूत नियम
बाथ र पूल - जादू संयोजन!
व्यावहारिक सल्लाह र पोर्क तयार गर्न केही तरिकाहरू
म गुप्तांग बाल हटाउन गर्नुपर्छ?
"आइरिस पब" (Tver) - कुना आइरिस heartland